လူမှုဝန်းကျင်ဝယ်— | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လူမှုဝန်းကျင်ဝယ်—
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Aug 17, 2011 in Copy/Paste | 25 comments
ကွန်မတို့ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား နှစ်သုံးဆယ်ကျော်တဲ့ထိ ကဗျာတပုဒ် စာတပုဒ်ကောင်းကောင်းမရေးတတ်ပါ။မိမိ ကိုမိမိ သိမ်ငယ်သလို ခံစားရပါတယ်။ခုလဲ MG ရွာထဲဝင်ရောက်ဖတ်ရှုတော့ မှအတွေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးဖွဲ့ ထားကြတာတွေတော့အားကျမိပါတယ်။ရွာသားအားလုံးရဲ့ ဝေမျှမှုကြောင့် ဗဟုသုတလဲ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဆက်ပြီးလဲ အစဉ်တစိုက်အားပေးနေမှာပါ MGရေ။နေ့ တနေ့ အသစ်ဖွင့်ပါပီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မတို့ အားလုံးသူထိတွေ့ ဆက်ဆံကြရ၊အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့ တွေ့ ကြ၊အားသစ်အင်သစ်တွေနဲ့ ကြုံဆုံရသလို၊စိတ်ပင်ပန်းညှိုးနွမ်းဖွယ်ရာများနဲ့ လည်းကြုံဆုံကြရစမြဲပါ။လူသားဆိုတာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသတ္တဝါများဖြစ်ကြပေတော့ မတွေ့ ချင်မဆုံချင်ပါလဲတွေ့ ရကြံရဦးမှာပါ။အားလုံးအတွက် ကဗျာလေးတပုဒ်ဝေမျှချင်တာပါ။ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာတော့မဟုတ်တာဝန်ခံပါရစေ။ရေးသူက ကျွန်မမောင်လေး ကိုးတန်းကျောင်းသားလေးပါ။ရွာသားများဝိုင်းဝန်းပြီး မန့်ပေးကြပါဦးနော်—
လောက လူ့ ခွင်လွန်ချမ်းမြေ့
အယ် pan pan ရေဆက်ပြောပါဦး–။ကျွန်မမောင်လေး ရေးထားတာလေးဖတ်ရတော့ ပိုပြီးသိမ်ငယ်သလို ခံစားရပါတယ်။သူတို့ လိုအတွေးကောင်းကောင်းနဲ့ ကလေးတွေ နိုင်ငံမှာအများကြီးနေမှာပါ။မြေတောင်မြှောက်ပေးကြဖို့ ဘဲလိုမယ်နော်
ဥပမာပြောရရင် စာဆိုဆရာဇော်ဂျီဆိုရင် ၂၁နှစ်သားအရွယ်မှာတင် ပိတောက်ပန်းလေးတွေအကြောင်း ကဗျာလေးရေးတယ်
ပိတောက်ပန်းလေးတွေရဲ့နေရာက ၀င်ရောက်ခံစားပြီး ကိုယ်ချင်းစာခဲ့တယ်
ဒီကနေ့ အသက်၂၁နှစ်သားတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ၊ ဆရာဇော်ဂျီ၂၁နှစ်သား(မောင်သိန်းဟန်)က ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ ဒါမျိုးပေ့ါ
တို့တိုင်းပြည်ကဗျာ ဆိုရင်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဖို့ ဘယ်လောက်အားမာန်ဖြစ်ရသလဲ
ဘယ်လောက်အကျိုးဖြစ်စေလဲ သတိပေးဆုံးမပြီး တိုင်းပြည်ကို အကျိုးကျေးဇူးပြုသွားတယ် (အကျိုးပြုပေသိ ဆင်းရဲတာတော့ မပြောပါနဲ့တော့)
ဆရာတင်ဆိုရင်လည်း တို့ဗမာအစည်းအရုံးအတွက် ရေးပေးသွားတဲ့သီချင်းက ဘယ်လောက်ထိတာသွားလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်
ကျွန်မပြောချင်တာက အတွေးအခေါ်မြင့်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကောင်းတော့ အကျိုးပြုနိုင်တာကို ပြောချင်လို့ပါ
ခုခေတ်တွေ့နေရတဲ့လူငယ်တွေ ပေါ့တီးပေ့ါပျက်တွေ များနေလို့
သူတပါးကို ထိခိုက်စေမှန်းမသိကြ၊ နစ်နာအောင်လုပ်ကြနဲ့ အောက်တန်းကျကြလွန်းလို့
He may be reincarnation (reborn) of “Shin ma har Yat hta thar ya”. Nobody knows!
ရေးထားတဲ့စာက ကိုးတန်းကျောင်းသားနဲ့တောင်မလိုက်ဘူး။ အရမ်းကောင်းပြီး အဓိပါယ်လဲပြည့်ဝတယ်။
အနုပညာ စာပေ ၀ါသနာပါရင် ၉ တန်းလည်း ပညာရည်ပြည့်ဝနေမှာပါ။ သူ့ရဲ့စာပေ လက်စွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ နောင်တစ်ချိန်မှာ စာရေးဆရာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူးနော်….
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးက ခုလို ချီးမွမ်းအားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် —
မင်းရဲ့ မောင်လေး က ကဗျာ ဇ တော့ ရှိသားပဲ။
ကိုယ်ကတော့ ကဗျာသမား စာသမားဆိုရင် ဘယ်အရွယ် မဆို လေးစားပါတယ် ။
ကိုယ် ကတော့ မော်ဒန် (ပို့ စ်မော်ဒန် ဘက် ပို စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့် ) အဲဒီလို ကာရန် နဘေ နဲ့သမားရိုးကျ ကဗျာလေးတွေ ကို ချစ်ပါတယ် ။
ကိုယ် ချစ်တဲ့ အရာတွေ ထဲ မှာ ကဗျာလေးတွေ လည်းပါတယ် ။
ဆက်ရေး ပြီး တင်ပြပေးပါဦးနော့ ။
ကြိုက်လို့ ကူးသွားပြီ မီးမီးရေ ကလေးအတွေး ကလေးအရေးမှ ဟုတ်ပါလေစ….
pooch ကမယုံကြည်တဲ့သဘောမျိုးထင်ပါတယ်။ကျွန်မက ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုသန့် ပါတယ်။ဘုရားမကြိုက်နတ်မကြိုက်တာဘယ်တော့ မှမလုပ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် ကျွန်မတန်ဖိုးထားအမြဲဖတ်ဖြစ်တဲ့ MG ရွာမှာ မဟုတ်မဟပ်တာတွေတင်ပြီး ညှိုးနွမ်းအောင်မလုပ်ဝံ့ပါဘူး
မဟုတ်ရပါဘူး မီးမီးရယ် ချီးကျူးတာပါ အတွေးနဲ့ အရေးက ကောင်းလို့လေ တမျိုးထင်သွားရင်တောင်းပန်တယ်နော်.. တချို့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ရင့်ကျက်တဲ့အတွေးမျိုးရှိတယ် ကိုယ်တွေ့ မြင်ဖူးတယ် ယုံတယ် အကြွင်းမဲ့ယုံတယ် ..နောက်ကိုယ်လည်းစကားပြောဆင်ခြင်ရမယ် ..တဖက်လူ အတွေးချော်စေမဲ့ အရေးမျိုး ရှောင်ပါ့မယ် သတိပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ မီးမီးရယ်…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးပါရှင်။နောက်လဲ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရေးကဗျာလေး တင်ဖြစ်အောင်ကြိုစားနေပါတယ်။သူ့ ကိုလဲထပ်ရေးဖြစ်အောင် အားပေးနေပါတယ်။သူ့ ဝါသနာလေးကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရမယ်လေ
စကားပြော ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ မန်ဘာ ကိုကြောင်ကြီးကို အရေးယူပါခင်ဗျ
ပွိုင့်တွေ မီးကုန်ရမ်းကုန် နှုတ်ပြစ်ပါခင်ဗျ
ဟယ် ဦးကြောင်ကြီးက ကဗျာလေးကောင်းကောင်းရေးနေတယ်မှတ်တာ ကိုဂျော်နီအောင်ပု ကိုအခြောက်ကြီးတဲ့။ဘယ်လိုကြောင့်လဲ ဦးကြောင်ရဲ့ ။
ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ကြံရာပါအဖြစ် ပွိုင့်နှုတ်ပါခင်ဗျ
မီးမီး နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ကိုဂျော်နီရယ်နော်။သူ က ကိုဝင်မန့် သွားတာလေ။ဟုတ်တယ် ဟုတ်။နောက်မပြောတော့ပါဘူး. ဟိ ဟိ။
မမီးမီး ရေးတဲ့ ပို့ စ်လေး ကောင်းပါတယ်။နောက်လဲ ၀င်ဖတ်ဖြစ်မှာပါ။
ဟိုက် ရွာထဲမှာ ယမ မင်းကြီး တွေရောပါလား …
ဟိုတစ်လောတုန်းက မှော်ဆရာဆိုတာတောင် တွေ့မိလိုက်ရဲ့
ရွာတော့ စည်ကားယုံတင်မက …………………
ကျုပ်တို့ စုန်းတွေကတော့ ရွာပြင်မှာပဲ နေတယ်ဗျို့ ..
မော်မော်သီး အတွက် မေပေါင် ရဲ့ လက်ဆောင်
` လောင်ဘု ( မှတ်ချက် အောင်ပု မဟုတ်ပါ )
အလုပ်ရှင်လည်း မညစ်နဲ့ ကွယ်
ကစား ကွန်ပျူတာ မြင်ပါလျှက်
တောက သူ့ လင် မြင်တန်းတွေ့ 
နေမယ် မပြောင်းပါဟေ့ ´
အယ် ကိုလေပွကြီးသူ များကိုနော် မော်မော်သီး တဲ့။သေရောဟ။ငါနော် အဖြစ်ကဆိုးပါတယ်။ကိုလေပွက ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကိုယ်တိုင်ကဗျာစပ်ထားတာနေမှာ ;)
မမီးမီးသော်က facebook အသုံးများတယ်နဲ့တူတယ်၊ အသက်လဲငယ်မယ်ထင်ပါတယ်၊ ရခိုင်မလေးဖြစ်မယ်
လို့လဲ ခန့်မှန်းမိပါရဲ့၊ ဟုတ်ပါရဲ့လား။
ဖေ့စ်ဘွခ်မသုံးသလောက်ပါဘဲ။ခုတော့ google plus သုံးကြည့်နေတယ်လေ။ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မအသက်က သုံးဆယ့်တစ်နှစ်ပါရှင်။အသကမမေးပါနဲ့ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားနော်။ကိုပင်လယ်ပျော်လား(မပင်လယ်ပျော် ဖြစ်နေရင်)မသိ။ကျွန်မက ဒွါရာဝတီ ဇာတိပါရှင်။ထပ်တော့ မမေးတော့နဲ့ ဖြေနိုင်တော့ဝူးးးးး
ဖေ့စ်ဘွခ်မသုံးသလောက်ပါဘဲ။ခုတော့ google plus သုံးကြည့်နေတယ်လေ။ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မအသက်က သုံးဆယ့်တစ်နှစ်ပါရှင်။အသက်ကမမေးပါနဲ့ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားနော်။ကိုပင်လယ်ပျော်လား(မပင်လယ်ပျော် ဖြစ်နေရင်)မသိ။ကျွန်မက ဒွါရာဝတီ ဇာတိပါရှင်။ထပ်တော့ မမေးတော့နဲ့ ဖြေနိုင်တော့ဝူးးးးး
အင်း ကိုပင်လယ်ပျော် ဆိုတဲ့တိုင်းဘဲ အကုန်လိုက်စပ်စုမနေနဲ့ ၊ပင်လယ်နားက ရခိုင်သူဆိုရင် တော့မချောလောက်ပါဘူး၊ကဲ ဒီလောက် စပ်စုရအောင် ကိုပင်လယ်ပျော်က အင်းစိန် CID ကထင်ပါတယ်။ငါကိုယ်တော် ယမမင်း မှတ်သားထားလိုက်ပါမယ်။ငရဲရောက်မှရှင်းပေတော့ ဟားးးးးးဟားးးး